Hornblower Cruises and Events dia manome anarana talen'ny fizahantany vaovao
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Hornblower Cruises and Events dia manome anarana talen'ny fizahantany vaovao
Amin'ny maha talen'ny fizahantany nasionaly azy, Hippensteel dia tompon'andraikitra amin'ny famaritana sy ny fitarihana ny paikady maharitra sy maharitra manodidina ny varotra fitsangatsanganana nasionaly sy ny fifandraisan'ny mpanjifa antoko fahatelo ho an'ny Hornblower Cruises and Events
Tara Hippensteel dia notendrena ho talen'ny fizahan-tany vaovao an'ny Hornblower Cruises and Events
Hippensteel dia hiara-hiasa amin'ireo ekipam-paritra eo an-toerana, hanome ny fitarihana sy ny fahaiza-manao mba hampitomboana ny fitomboan'ny fidiram-bola mahomby ary hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny tsenan'ny fizahantany mifanaraka amin'ny vina sy paikadin'ny orinasa ankapobeny
Nanomboka ny asany Travel & fizahan-tany tao amin'ny Hornblower's Spirit of Chicago i Tara tamin'ny taona 2002 - 2003 ho mpitantana ny fizahantany fizahan-tany
Hornblower Cruises and Events dia nanambara androany fa Tara Hippensteel dia voatendry ho talen'ny fizahantany nasionaly. Hippensteel dia manatevin-daharana ny orinasa manana traikefa 20 taona mahery eo amin'ny indostrian'ny varotra dia sy iraisam-pirenena.
"Faly izahay mandray an'i Tara hiverina amin'ny fizarana Cruises and Events amin'ny maha talen'ny fizahan-tany nasionalin'ny ekipa anay," hoy i Paul Sanett, SVP an'ny Sales & Marketing. "Matoky izahay fa ny fahaizan'i Tara be dia be amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ny fanoloran-tena ho an'ny mpanjifany ary ny fisainana mieritreritra mialoha dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny tanjon'ny orinasan'ny orinasanay eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany."
Amin'ny maha talen'ny fizahantany nasionaly azy, Hippensteel dia tompon'andraikitra amin'ny famaritana sy ny fitarihana ny paikady maharitra sy maharitra manodidina ny varotra fitsangatsanganana nasionaly sy ny fifandraisan'ny mpanjifa fahatelo. Fitsangatsanganana an-tsokosoko sy trangan-javatra. Hippensteel dia hiara-hiasa amin'ireo ekipam-paritra eo an-toerana, hanome ny fitarihana sy ny fahaiza-manao mba hampitomboana ny fitomboan'ny fidiram-bola mahomby ary hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny tsenan'ny fizahantany mifanaraka amin'ny vina sy paikadin'ny orinasa ankapobeny.
"Faly aho hiaraka amin'ny fianakavian'i Hornblower ary hiara-hiasa amina vondron'olona entin'ny soatoavin'ny orinasan'izy ireo fototra sy ny fanolorantenan'izy ireo amin'ny famoahana traikefa vahiny mahafinaritra iray," hoy i Hippensteel. Manantena aho ny hiara-hiasa amin'ny ekipa misimisy momba ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny orinasa amin'ny ankapobeny, amin'ny famaritana sy famolavolana fotoana vaovao ary hanohizako hamorona fahatsiarovana tsy hay hadinoina ho an'ireo vahiny mahatoky toy izany.
Nandritra ny roapolo taona niainan'ny indostria, vao haingana i Hippensteel dia namolavola programa nasionaly fitsangatsanganana sy fitsangatsanganana ho an'ny toerana Topgolf 60 manerana ny firenena. Talohan'izay dia nitana andraikitra isan-karazany tamin'ny Hard Rock Cafe i Hippensteel, ao anatin'izany ny talen'ny fivarotana fizahan-tany nasionaly, Amerika Avaratra izay nanohanany sy niarahany niasa tamina orinasa 40 mahery Hard Rock Cafés nanerana ny firenena. Ho fanampin'izany, Hippensteel dia mijanona ho mavitrika amin'ny fampisehoana fivarotana varotra anatiny sy iraisam-pirenena lehibe mba hampidirana ny fandraisana anjaran'ny birao ao anatin'ny fikambanana indostria nahazo fankatoavana, anisan'izany ny ABA, NTA ary SYTA.
Nanomboka ny asany Travel & fizahan-tany tao amin'ny Hornblower's Spirit of Chicago i Tara tamin'ny taona 2002 - 2003 ho mpitantana ny fizahantany fizahan-tany.